को होलिन् उनी ? ‘मेरो शव आमालाई दिनु’ भन्ने नोट लेखेर रुखमा झुण्डिइन् – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/को होलिन् उनी ? ‘मेरो शव आमालाई दिनु’ भन्ने नोट लेखेर रुखमा झुण्डिइन्
विराटनगर । जंगलको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परेकी युवतीको अझै सम्म पनि पहिचान हुन सकेको छैन । उनका आफन्त पनि कोही सम्पर्कमा आएका छैनन् । मोरङको बेलबारी नगरपालिका १० स्थित सिर्जना सामुदाकिय बनको रुखमा उनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन् । उनको पहिचान खुल्ने कुनै कुरा छैन । शव नजिकै प्रहरीले ‘मेरो शव आमालाई जिम्मा दिनु’ भन्ने नोट लेखेको फेला पारेको छ ।
कुवेतका राजा सबा अल अहमदको निधन
जेठ २५ देखि निश्चित जिल्लामा छोटो दुरीका सवारी चलाउने